ရုရှား မှ အထူးတပ်ဖွဲ့များအတွက် အသစ်ဖန်တီးထားသည့် Mil Mi-8 ရဟတ်ယဉ်သစ်အား စမ်းသပ်ပျံသန် – Burmese Online News
ရုရှား မှ အထူးတပ်ဖွဲ့များအတွက် အသစ်ဖန်တီးထားသည့် Mil Mi-8 ရဟတ်ယဉ်သစ်အား စမ်းသပ်ပျံသန်
ရုရှား မှ အထူးတပ်ဖွဲ့များအတွက် အသစ်ဖန်တီးထားသည့် Mil Mi-8 ရဟတ်ယဉ်သစ်အား စမ်းသပ်ပျံသန်း။ ( အထူးစစ်ဆင်ရေးတွေအတွက် သီးသန့်သုံးမှာ ပေါလောရှောလာ သွားလုပ်လို့မရဘူး)
*အောက်တွင် ယူနီကုတ်ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။
🇷🇺 ရုရှားန်ိုင်ငံက အထူးစစ်ဆင်ရေးတပ်ဖွဲ့များ(Special Operations Forces) အတွက် အသစ်ဖန်တီးထားတဲ့ Mil Mi-8 AMTSh-VN အမျိုးအစား ရဟတ်ယာဉ်အား စမ်းသပ် ပျံသန်းမှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ရုရှားနိုင်ငံအဆင့်မြင့်နည်းပညာ ကော်ပိုရေးရှင်း “Rostec”ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ‘Russian Helicopters Group’ မှ CEO ဖြစ်သူက ဇူလိုင် ၂၂ ရက်နေ့က ထုတ်ဖော်ပြောကြား လာပါတယ်။
Mil Mi-8AMTSh-VN ရဟတ်ယာဉ်များဟာ R&D အလုပ် ခွင်မှာပဲ တစ်လျှောက်လုံး အချိန်ကြာမြင့်စွာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး တည်ဆောက်မှုပြုခဲ့တဲ့ အမျိုးအစားတွေပါ။ အခု ဗဟိုအမျိုးသား ရဟတ်ယာဉ်တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ကနေပြီး စမ်းသပ်ပျံသန်းဖို့ ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ လုပ်ငန်းခွင် စီမံခန့်ခွဲရေးမှခေါင်းဆောင် ဖြစ်သူက ဆိုပါတယ်။
Rostec Aviation Cluster Industrial မှ ဒါရိုက်တာ ဖြစ်သူ Anatoly Serdyukov ကတော့ လက်နက်တပ်ဆင်မှု အပိုင်းမှာ သဘောထာထား ကွဲလွဲမှုရှိခဲ့ပြီး တိုက်ပွဲဝင်အတွေ့အကြုံ အပေါ်အခြေခံ၍ နည်းပညာအထောက်အကူများဖြင့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ကာ တည်ဆောက်မှုယူခဲ့ရကြောင်း အဆိုပါရဟတ်ယာဉ်များနှင့် ပတ်သတ်၍ ပြောကြားပါတယ်။
ပန်ကာ(ဒလက်)နည်းပညာအသစ်မှာ တိုးတက်မှုရှိရန်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်တဲ့ စွမ်းအင်ကနေ လည်ပတ်မှုနုန်း မြင့်မားစေတဲ့အင်ဂျင် ဖြစ်စေဖို့အတွက် ထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပြီး အထူးစစ်ဆင်ရေးလို တာဝန်တွေအတွက် တိုက်ပွဲဝင်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်း ပိုမိုတိုးတက် မှုများ ရှိလာစေရန် လိုအပ်တဲ့နေရာများမှာ အဆင့်မြှင့်တင်မှု (Upgraded) တွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
လုပ်ငန်းရဲ့ ပထမအဆင့်အနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလအတွင်းက ခရီးဝေးပျံသန်း မှုကို ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့တယ်လို့သိရပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ ယခု လိုအမျိုးအစားရဟတ်ယာဉ်တွေ ၂ စီးထက်ပိုမိုသော အရေ- အတွက်ဖြင့် ပူးပေါင်းပျံသန်းရန် အဆင်သင့်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း က်ို ၄င်းမှ ဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာကျင်းပတဲ့ Army-2019 နိုင်ငံတကာ လက်နက်အရောင်းပြပွဲ (lnternational Arms Show) အတွင်း အထူးပြုလုပ် ထားတဲ့ နောက်ဆုံးထုတ် Mi-8AMTSh-VN ရဟတ်ယာဉ် ၁၀ စင်းကို ဝယ်ယူဖို့ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဆိုပါပစ်ကူပေး (gunships) များကို ၂၀၂၀-၂၁ ခုနှစ်မှာ လွှဲပြောင်းပေးဖို့ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။
ရဟတ်ယာဉ်အသစ်မှာ ခေတ်မီတဲ့ပုံစံနဲ့ တိုးတက်မှုရှိစေရန် အတွက် အထူးစီမံဖန်တီးထားပြီး ဆီးရီးယားဒေသတွေက စစ်ဆင်ရေးတွေမှာ စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝစွာ တိုက်ပွဲဝင်နိုင်စေရန် တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဓိကပြုလုပ် ထားတဲ့ လက်နက်တပ်ဆင်မှုအပိုင်းမှာတော့ Mi-8AMTSh -VN ရဟတ်ယာဉ်ရဲ့အစွန်း ၂ ဖက် (two side-mounted) မှာ လားရာသို့ပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ ၁၂.၇ မီလီမီတာ စက်သေနတ်ကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
အပြင်ဘက်နေရာမှာ ပျံသန်းမှုထိန်းချုပ်- ရေးနဲ့ မြင်ကွင်းကြည့် ကိရိယာအသစ်တို့ကို တပ်ဆင်ထားပြီး Gyro- Stabilized Opto-electronic နည်းပညာတစ်ခု လည်း ပါရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရှာဖွေကြည့်ရှုရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ Searchlight နဲ့ infrared emitter တို့လို့ နည်းပညာ များလည်းပါဝင်ပြီး dual-band lighting စနစ်နဲ့တပ်ဆင် ထားတဲ့ အလင်းရောင်ဖြင့် ညကြည့်မြင်ကွင်းပါတဲ့ goggles ကို လိုက်လျောညီထွေစွာ အသုံးပြုနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Mi-8AMTSh-VN ရဟတ်ယာဉ်တွေကို မှာယူခဲ့စဉ်က ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးပြု အလိုအလျောက်မောင်းနှင်တဲ့- (digital autopilot system)စနစ်ကို ခုခံကာကွယ်ရေး အစီအစဉ်အတွက် မစ်ဆိုင်းများအား အလိုအလျေက်တုံ့ပြန် ကာကွယ်မှုပေးမည့်(automatically detects missile- launches against)စနစ်နဲ့အတူ တစ်ပါတည်း တပ်ဆင် ပေးဖို့ မှာကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အပူငွေ့ရှာမစ်ဆိုင်း (missile homing warheads) များရဲ့အာရုံခံ များကို ပျက်ပြားစေမဲ့ Jams များနဲ့ အပူအစားထိုးမီးပန်း (releases heat flares)များ လည်း ပါဝင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရဟတ်ယာဉ်အဖွဲ့ဝင်ရဲ့အခန်း(crew’s cabin)နဲ့ ရဟတ်ယာဉ် မှာပါတဲ့ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအရေးပါတဲ့နေရာတွေကို တိုက်တေ- နီယံသတ္တုစပ်ပါတဲ့ သံထည်နဲ့ ကာရံပေးထားမှာပါ။ ရဟတ်ယာဉ် ကုန်ပစ္စည်းတင်ရာနေရာနဲ့ အတွင်းဘက်ကအလွှာကို Kevlar နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ အဖွင့်အပိတ်ပြုရာမှာ အလေးချိန်ပေါ့ပါးပြီး ဒိုင်းသဖွယ်ကာရံပေးမယ့် ပြတင်းပေါက်ပါသံထည်တံခါးကို အသုံးပြုထားပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ရုရှား မှ အထူးတပျဖှဲ့မြားအတှကျ အသဈဖနျတီးထားသညျ့ Mil Mi-8 ရဟတျယဉျသဈအား စမျးသပျပြံသနျး။ ( အထူးစဈဆငျရေးတှအေတှကျ သီးသနျ့သုံးမှာ ပေါလောရှောလာ သှားလုပျလို့မရဘူး)
ရုရှားနိုငျငံက အထူးစဈဆငျရေးတပျဖှဲ့မြား(Special Operations Forces) အတှကျ အသဈဖနျတီးထားတဲ့ Mil Mi-8 AMTSh-VN အမြိုးအစား ရဟတျယာဉျအား စမျးသပျ ပြံသနျးမှု ပွုလုပျခဲ့ကွောငျး ရုရှားနိုငျငံအဆငျ့မွငျ့နညျးပညာ ကျောပိုရေးရှငျး “Rostec”ရဲ့ အစိတျအပိုငျးတဈခု ဖွဈတဲ့ ‘Russian Helicopters Group’ မှ CEO ဖွဈသူက ဇူလိုငျ ၂၂ ရကျနကေ့ ထုတျဖျောပွောကွား လာပါတယျ။
Mil Mi-8AMTSh-VN ရဟတျယာဉျမြားဟာ R&D အလုပျ ခှငျမှာပဲ တဈလြှောကျလုံး အခြိနျကွာမွငျ့စှာ တိုငျပငျဆှေးနှေးပွီး တညျဆောကျမှုပွုခဲ့တဲ့ အမြိုးအစားတှပေါ။ အခု ဗဟိုအမြိုးသား ရဟတျယာဉျတညျဆောကျရေးအဖှဲ့ ကနပွေီး စမျးသပျပြံသနျးဖို့ ခှငျ့ပွုလိုကျပွီဖွဈတယျလို့ လုပျငနျးခှငျ စီမံခနျ့ခှဲရေးမှခေါငျးဆောငျ ဖွဈသူက ဆိုပါတယျ။
Rostec Aviation Cluster Industrial မှ ဒါရိုကျတာ ဖွဈသူ Anatoly Serdyukov ကတော့ လကျနကျတပျဆငျမှု အပိုငျးမှာ သဘောထာထား ကှဲလှဲမှုရှိခဲ့ပွီး တိုကျပှဲဝငျအတှအေ့ကွုံ အပျေါအခွခေံ၍ နညျးပညာအထောကျအကူမြားဖွငျ့ ဒီဇိုငျးရေးဆှဲ ကာ တညျဆောကျမှုယူခဲ့ရကွောငျး အဆိုပါရဟတျယာဉျမြားနှငျ့ ပတျသတျ၍ ပွောကွားပါတယျ။
ပနျကာ(ဒလကျ)နညျးပညာအသဈမှာ တိုးတကျမှုရှိရနျပွုလုပျခဲ့ပွီး ဖွဈတဲ့ စှမျးအငျကနေ လညျပတျမှုနုနျး မွငျ့မားစတေဲ့အငျဂငျြ ဖွဈစဖေို့အတှကျ ထောကျပံ့ပေးမှာဖွဈပွီး အထူးစဈဆငျရေးလို တာဝနျတှအေတှကျ တိုကျပှဲဝငျစှမျးဆောငျရညျပိုငျး ပိုမိုတိုးတကျ မှုမြား ရှိလာစရေနျ လိုအပျတဲ့နရောမြားမှာ အဆငျ့မွှငျ့တငျမှု (Upgraded) တှပွေုလုပျခဲ့ကွောငျး ဆိုပါတယျ။
လုပျငနျးရဲ့ ပထမအဆငျ့အနနေဲ့ ပွီးခဲ့တဲ့နိုဝငျဘာလအတှငျးက ခရီးဝေးပြံသနျး မှုကို ဆောငျရှကျပွီးစီးခဲ့တယျလို့သိရပွီး နောကျဆုံးမှာတော့ ယခု လိုအမြိုးအစားရဟတျယာဉျတှေ ၂ စီးထကျပိုမိုသော အရေ- အတှကျဖွငျ့ ပူးပေါငျးပြံသနျးရနျ အဆငျသငျ့ရှိနပွေီဖွဈကွောငျး ကို ၎င်းငျးမှ ဆကျလကျပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
ရုရှားကာကှယျရေးဝနျကွီးဌာနကနပွေီး ၂၀၁၉ ခုနှဈမှာကငျြးပတဲ့ Army-2019 နိုငျငံတကာ လကျနကျအရောငျးပွပှဲ (lnternational Arms Show) အတှငျး အထူးပွုလုပျ ထားတဲ့ နောကျဆုံးထုတျ Mi-8AMTSh-VN ရဟတျယာဉျ ၁၀ စငျးကို ဝယျယူဖို့ လကျမှတျရေးထိုးခဲ့တာဖွဈပွီး အဆိုပါပဈကူပေး (gunships) မြားကို ၂၀၂၀-၂၁ ခုနှဈမှာ လှဲပွောငျးပေးဖို့ သတျမှတျခဲ့ပါတယျ။
ရဟတျယာဉျအသဈမှာ ခတျေမီတဲ့ပုံစံနဲ့ တိုးတကျမှုရှိစရေနျ အတှကျ အထူးစီမံဖနျတီးထားပွီး ဆီးရီးယားဒသေတှကေ စဈဆငျရေးတှမှော စှမျးဆောငျရညျပွညျ့ဝစှာ တိုကျပှဲဝငျနိုငျစရေနျ တညျဆောကျထားတာ ဖွဈတယျလို့ဆိုပါတယျ။ အဓိကပွုလုပျ ထားတဲ့ လကျနကျတပျဆငျမှုအပိုငျးမှာတော့ Mi-8AMTSh -VN ရဟတျယာဉျရဲ့အစှနျး ၂ ဖကျ (two side-mounted) မှာ လားရာသို့ပဈခတျနိုငျတဲ့ ၁၂.၇ မီလီမီတာ စကျသနေတျကို တပျဆငျထားပါတယျ။
အပွငျဘကျနရောမှာ ပြံသနျးမှုထိနျးခြုပျ- ရေးနဲ့ မွငျကှငျးကွညျ့ ကိရိယာအသဈတို့ကို တပျဆငျထားပွီး Gyro- Stabilized Opto-electronic နညျးပညာတဈခု လညျး ပါရှိမှာဖွဈပါတယျ။ ရှာဖှကွေညျ့ရှုရာမှာ အသုံးပွုတဲ့ Searchlight နဲ့ infrared emitter တို့လို့ နညျးပညာ မြားလညျးပါဝငျပွီး dual-band lighting စနဈနဲ့တပျဆငျ ထားတဲ့ အလငျးရောငျဖွငျ့ ညကွညျ့မွငျကှငျးပါတဲ့ goggles ကို လိုကျလြောညီထှစှော အသုံးပွုနိုငျမှာလညျးဖွဈပါတယျ။
Mi-8AMTSh-VN ရဟတျယာဉျတှကေို မှာယူခဲ့စဉျက ဒီဂဈြတယျနညျးပညာအသုံးပွု အလိုအလြောကျမောငျးနှငျတဲ့- (digital autopilot system)စနဈကို ခုခံကာကှယျရေး အစီအစဉျအတှကျ မဈဆိုငျးမြားအား အလိုအလကျြေတုံ့ပွနျ ကာကှယျမှုပေးမညျ့(automatically detects missile- launches against)စနဈနဲ့အတူ တဈပါတညျး တပျဆငျ ပေးဖို့ မှာကွားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အပူငှရှေ့ာမဈဆိုငျး (missile homing warheads) မြားရဲ့အာရုံခံ မြားကို ပကျြပွားစမေဲ့ Jams မြားနဲ့ အပူအစားထိုးမီးပနျး (releases heat flares)မြား လညျး ပါဝငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ရဟတျယာဉျအဖှဲ့ဝငျရဲ့အခနျး(crew’s cabin)နဲ့ ရဟတျယာဉျ မှာပါတဲ့ နညျးပညာပိုငျးဆိုငျရာအရေးပါတဲ့နရောတှကေို တိုကျတေ- နီယံသတ်တုစပျပါတဲ့ သံထညျနဲ့ ကာရံပေးထားမှာပါ။ ရဟတျယာဉျ ကုနျပစ်စညျးတငျရာနရောနဲ့ အတှငျးဘကျကအလှာကို Kevlar နဲ့ ပွုလုပျထားတဲ့ အဖှငျ့အပိတျပွုရာမှာ အလေးခြိနျပေါ့ပါးပွီး ဒိုငျးသဖှယျကာရံပေးမယျ့ ပွတငျးပေါကျပါသံထညျတံခါးကို အသုံးပွုထားပါကွောငျး တငျပွလိုကျရပါတယျ။
ဝမ်းသာစရာ သတင်းကောင်းပါ!!! ကိုဗစ်-၁၉ လူနာအမှတ် ၈ ရောဂါအသည်းအသန် အခြေအနေကို ကျော်လွှားနိုင်ပြီ!!
တရုတ်နိုင်ငံက ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဆရာဝန်တွေ သူတို့မိသားစုကို နှုတ်ဆက်ကြပြီ
အဘရဲ့ သမီးလေးကို သွားကြည့်ရင်း မျက်ရည်တွေ မထိန်းနိုင်အောင် ကျခဲ့ရတဲ့ ရွှေပိုးအိမ်
ညွှန်ကြားချက်ထွက်ပါ က အမရပူရ တာကျိုးမှုကြောင့် ပျက်စီးသွားတဲ့ စိုက်ခင်း အားလုံးကို သီးနှံလျော်ကြေး ချက်ချင်းထုတ်ပေးမည်
အမေရိကန်မှာ COVID-19 ကူးစက်ခံရသူ ၄ သန်းကျော်လွန်ပြီဖြစ်